काठमाडौंमा प्रदेश राजधानी बनाउने कुरा सोच्न पनि सकिदैनः मुख्यमन्त्री पौडेल (अन्तर्वार्ता)
बिहिबार, ७ चैत्र , २०७५
‘क्याप्टेन’ हेर्न प्रधानमन्त्री सपरिवार सिटी सेन्टर
होलीमा ९ सय १८ चालक कारबाहीमा
अक्सफोर्डलाई संस्कृतको चासो
फागुमा रंगीन काठमाडौं (तस्वीर सहित)
साफ फाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने
पूर्वको तीर्थ पाथीभरा (तस्वीर कथा)
फरार 'अर्बपति' नीरव मोदी लण्डनमा पक्राउ
‘सिप्रदी’ले बनायो विद्यालय
हवल्दारले कुटे चालक, तीनजना घाइते
घरेलु मदिरा कसरी बन्छ विषालु ?
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढाउन ६८ प्रज्ञार्थी छनोट
दाङमा यो वर्ष थप चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने
नेपाल चौथोपटक साफ च्याम्पियनसीपको फाइनलमा
खुल्यो मध्यपहाडी लोकमार्ग
पटके बलात्कारीलाई २५ वर्ष कैद
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा फागु पूर्णिमाको शुभकामना
काभ्रेमा प्रहरी र विप्लवका कार्यकर्ताबीच 'फायरिङ', दुई गिरफ्तार
जलवायु परिवर्तनले धेरै पानी, धेरै खडेरी
एक वर्षमा सात सय ४७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, ५ फाल्गुण , २०७४
डोरमणि पौडेल,मुख्यमन्त्री, प्रदेश–३
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रदेश राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन नहुने बताउँछन् ।
प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
काम गर्नका लागि आवश्यक कानून बनेको छैन । बजेट छैन । माथि र तल पनि सरकार छ, तर प्रदेशमा केही छैन । न टेक्ने ठाउँ छ, न समाउने हाँगो । विज्ञ टोलीलाई पाँचवर्षे योजना बनाउन भनेको छु । कम्तीमा दुई–चार महीना विकासका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यतिञ्जेल नीतिगत निर्णयमै सीमित हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश–३ मा प्रमुख समस्या के–के छन् ?
राजधानी काठमाडौं यही प्रदेशमा छ भने यातायात नै नपुगेको दुर्गम क्षेत्र पनि यसैमा छ । शुरुमा प्रदेश–३ का सबै १३ जिल्लालाई यातायात सञ्जालभित्र ल्याउनु छ । घना बस्तीहरूको अधिक जनसंख्या व्यवस्थापन पनि गर्नुछ । जनसंख्याको सन्तुलन बनाइराख्न गाउँमा विकास गर्नुछ । नत्र, गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ रोकिंदैन ।
संघ र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
स्थानीय सरकारलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्छौं । संघ र अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौं ।
स्थायी रुपमा प्रदेश राजधानी कहाँ रहन्छ ?
प्रदेश राजधानीका लागि हेटौंडा नै उपयुक्त छ । यसलाई अन्त सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको पनि छैन । केन्द्रकै राजधानी व्यवस्थित गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेश राजधानी लैजाने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन । जहाँसम्म हेटौंडा प्रदेश–३ को केन्द्रमा छैन भन्ने कुरा छ, देशको राजधानी काठमाडौं नेपालको कति केन्द्रमा छ ? त्यसबाहेक प्रदेशमा जनताको धेरै काम पनि पर्दैन ।
(प्रदेश सरकारसम्बन्धी रिर्पोटका लागि ६ फागुनको हिमाल खबरपत्रिका हेर्नुहोला)
बुधबार, ६ चैत्र , २०७५ होलीमा ९ सय १८ चालक कारबाहीमा
बुधबार, ६ चैत्र , २०७५ अक्सफोर्डलाई संस्कृतको चासो
बुधबार, ६ चैत्र , २०७५ फागुमा रंगीन काठमाडौं (तस्वीर सहित)
अन्तर्वार्ता/विचार ‘वैदिक शिक्षा नै शान्तिको सूत्र’
टिप्पणी ‘समृद्ध समाजका लागि धर्मको नाममा हुने विभेद र हिंसाबारे बोलौं’
‘पर्वतारोहण विश्वविद्यालय आवश्यक’ हिमालखबर
सोमबार, ४ चैत्र , २०७५ सम्मेलनको मुखमै बन्ला त समानान्तर प्रलेस ?
शुक्रबार, १ चैत्र , २०७५ शिशिर योगीको अल्बम ‘शिशिर’को लोकार्पण